#PPn ni kufti qabsoo itti fufa! – Kichuu
HomeAfaan OromooNews#PPn ni kufti qabsoo itti fufa!
Hidhamtoonni Oromoo 46 ta’an eega dheengadda galgalaa kaasee nyaata lagatanii jiru. Sababni diddaa isaanis hanga ammaati sababa tokko malee hidhaa nuunmaleef nusaaxilaan matti fi firrootan keenyan akka walihin’argine tanne jirra,Vaayirasi koronnaafile saaxilamnnee jirra jennee yaaddoo hamaa keessa jirra jedhu. Kuunis qorattoon poolisii lakkofsan 11ta’an vaayirasii koronnaatin qabanman akka turanif Jimata darbe nubiraa ambulaansidhan fadhatamani deemu isaani ijaan argine jirra jechuun dhamsa dhoksan isaan bira gahen beeknee jira waan taheef hatattamaan furmaatin akka kennamuuf ciimsaan gaafatani jiru.
Nyaatas hanga har’aa guyyoota sadiif lagachuu isaani himamaa jira, Iddoon itti hidhamanis Finfinee naannoo kiloo 6 Biiroo qabeenya fi dhabamisisaa meshaa jedhutiidha.kana dura wajjira OPDO ture bara Zalalam Jamanee faa. Iddoon kun underground fi idoo torchiin yeroo amma kana itti gaggeefama jiru ta’us ibsani jiru.
Bara mootumoota H/Silaseefi Minlikis idoo kun mana itti ilmoon namaa dararaa guddaa itti argaa turteedha jedhama. Iddoo itti nama qalan ,itti nama fannisani fi itti nama guban fi awwaala hunda iddoo qabuudha.Hara’as seenaa kuna ammas itti fufeetuma jira! Maqaa namoota hidhamtoota kanaa kaneenin asi gadi kanadha.
Meseret Dhaba Kene
Dhugumatti Gaazixxeessaa OMN Guyyoo Waariyoo Guyyaa har’aa Ija Oromoota Jawar Mohammed irratti Ragaa sobaa hin bahu jadhee diduun isaa ummata Oromoo guutuu boonseera! TEAM CULULLEE Jirtuu?
Guyyoo Waariyoo Nu eebbisaa warri amma Online irra jirtan? Guyyaa har’aa Guyyoo Waariyoo irra hangam gammadan?
PPn ni kufti qabsoo itti fufa!